'गणतन्त्र ओली जस्ता गलत व्यक्तिको हातमा परेको छ'
प्रदीप पौडेल, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस शुक्रबार, असार २९, २०७५ मा प्रकाशित
नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पौडेल कांग्रेसका चर्चित नेताका रुपमा परिचित छन् । पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र खुलेरै नेतृत्वप्रति वैचारिक तथा सांगनिक सवाललाई लिएर कडा विमति राख्दै आएका पौडेल सरकारको रवैयाप्रति पनि उत्तिकै आक्रामक देखिए । पौडेलले जनतापाटीका लागि कृष्ण गिरीसँग कुरा गर्दै सरकार एकमनावादी अथवा अधिनायकवादी प्रवृतितर्फ उन्मुख भएको भन्दै गणतन्त्र अहिले गलत मानिसको हातमा गएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
निर्वाचन हारेको करिब ७ महिनापछि हेटौडामा ७५ जिल्लाका कांग्रेसका सभापतिहरुको भेला बोलाउनु भयो, हारको जिम्मा कसलाई दिइयो ?
अहिले पनि हाम्रो पार्टीमा हारको बारेमा बहस जारी छ, यसको जिम्मा कसले लिने भनेर । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै यही कुराको बारेमा निरन्तर छलफल गर्ने भनिएको छ । यही भएर सबै जिल्लाको सभापतिको भेला भएको हो । यसमा पनि छलफल त भयो तर सबै कुरा यो भेलाले टुङग्याएको छैन । उहाँहरुले आ–आफ्ना धारणा राखे । तर अब हामी कसरी जाने भनेर महासमितिको बैठक बोलाउँछौ ।
महासमितिको बैठकबाट कांग्रेस नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्छ । यही बैठकले आगामी दिनको लागि नयाँ निष्कर्ष सहित जाने छ । यहीँबाट कांग्रेस सच्चिएर आउने छ ।
नेपाली कांग्रेसले महासमितिको बैठक कहिले बोलाउँदै छ ?
देश अहिले संघीयतमा गएको छ । देशका सबै कामकाज संघीय संरचनामा चलिरहेको छ । तर नेपाली कांग्रेस अहिले पनि पूरानै सांगठनिक ढाँचामा चलेको छ । अब यसलाई नयाँ संरचनामा लैजानको लागि पनि महासमितिको बैठक बोलाउन अनिवार्य भएको छ ।
पार्टीको दैनिक काम कारबाही गर्न समस्या आएको छ । अर्को नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । यसकोलागि पनि कांग्रेसमा नयाँपन नयाँ तौरतरिका चाहिन्छ । यसकोलागि पनि महासमिति बैठक आवश्यक भएको छ । यसका अगाडी धेरै चुनौति छन् । यसकोलागि पनि नयाँ तरिकाले चल्नु पर्ने छ । कांग्रेस चुस्त दुरुस्त बन्न पनि महासमितिको बैठक बोलाएर विधानमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिपक्षमा भएको समयमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने । जनताको पक्षमा आवाज उठाउन पनि भूमिका खेल्नु पर्छ । यसकोलागि महासमिति बैठक भदौमा बोलाउनु पर्छ । भदौको सरुवातमा बैठक बोलाएर । विधानमा परिवर्तन गरेर संगठन निर्माणमा लाग्नु पर्छ । अर्को महाधिवेशनको तयारी सुरु गर्नुपर्छ ।
देश संघीय संरचनामा गएर निर्वाचन भएको एक बर्ष भइसक्यो तर नेपाली कांग्रेस किन संघीय संरचनामा गएन ?
यही अच्चम छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा देशमा संघीय संविधान जारी भयो । देश संघीयतामा गयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । कांग्रेसको नेतृत्व भने पार्टीलाई त्यो ढाँचामा ढाल्न चाहदैन ।
हामी भन्छाैं संघीय समिति बन्नु पर्छ । हामीले प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ पालिका र नगरपालिकाका सम्मेलन गरेर नेतृत्व चयन गरौं, कमिटी बनाऔं भनेका छौं । नेतृत्वले पार्टीको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । यति दबाब दिंदा पनि नहुँदा नेतृत्वको टालटुले प्रवृति हावी छ । पार्टी चलाउने मनोवृति पुरानै भएकाले यस्तो भएको हो ।
नेतृत्वका कारण अहिले पार्टी संघीय ढाँचामा नगएको भन्नु भएको हो ?
नेपाली कांग्रेसको विधानमा संघीय कमिटी बनाउन अथवा विधान लागु गर्न किन समस्या ? प्रदेशको सम्मेलन गर्न के समस्या छ ? अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौं । अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा हुनु पर्ने भनेको संगठन हो । संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने हो । पार्टीलाई विधानसम्मत ढंगमा संचालन गर्नु पर्छ ।
तर हाम्रो पार्टीका सबै तहका बैठकमा नेतृत्वलाई पार्टी विधानसम्मत तरिकाले चलाउन भन्नु पर्छ । यो एक दिनको कुरा, एक बैठकको कुरा होइन । सधै यस्तो भन्नु पर्छ । यो भनेको त लाज मर्दो हो नि । पार्टीलाई पनि विधान अनुसार चलाउ भनिरहनु पर्छ र ? तर हामीले भनिरहेका छौं । नीति र विधि अनुसार चल्नु पर्ने पार्टी किन चलिरहेको छैन ? यही छ पार्टीमा समस्या । हामीले भन्नु पर्छ र संघीय संरचनामा पार्टीलाई लैजानुहोस भनेर ? पहिला नै लगिसक्नु पर्थ्याे । तर अहिले पनि हामी संघीय ढाँचामा पार्टीका संगठन संचालन गरौं भनिरहेका छाैं ।
पार्टीलाई संघीय ढाँचामा नलैजाँदा के नेतृत्वलाई घाटा हुन्छ र ?
पछिल्लो समयमा कांग्रेसले निर्वाचनमा भने जस्तो परिणाम ल्याउन सकेन । यसको जिम्मेवारी लिन नेतृत्व तयार छैन । कांग्रेस ठूलो पार्टी हो । कम्युनिस्ट एकतापछि हामी दोस्रो भएका छाैं ।
अपजस लिन तयार नभएको नेतृत्वका कारण आम कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । यसको असर पनि नेतृत्वमा परेको छ । प्राविधिक रुपमा मात्र हामी कमजोर भएका छाै‌ । नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि संस्थागत रुपमा उठेको छ । यसबाट नेतृत्वले हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर नै आलटाल हु‘दैछ । यो जति रोक्न खोजेपनि रोकिंदैन । यो कुरा पूरा भएर नै छोड्छ । कमजोरी सुधार्नु भन्दा पनि भाग्ने काम हुँदैछ । यो हुन हामी दिंदैनौ । यो सबै कुरा नेतृत्वको कारण भएको हो ।
प्रतिपक्ष साह्रै कमजोर भयो भन्ने आरोप छ नि ?
हो, अहिले प्रतिपक्ष कमजोर भयो भन्ने छ । यो संसदमा भएको प्रस्तुतिलाई हेरेर भनिएको हो । मुख्य गरि नीति तथा कार्यक्रमलाई ताली बजाएर समर्थन गर्यो । नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको छैन । हिजो जुन घोषणापत्र जारी गरेर चुनाव जितेको थियो, त्यो किसमको बजेट आएन । यसलाई संसदमा कडा रुपमा विरोध गर्नु पथ्र्यो । यसकारण पनि हो ।
अर्को कुरा सरकार दुई तिहाइको दम्भमा जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ । तर यो कुरा हामीले सडकबाट जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौं । हामीले विषयको सुचिकृत गर्नुपथ्र्यो । यति काम यो यो कारणले गलत छन् भनेर जनतालाई भन्नु पथ्र्यो ।
यो सरकारले केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न चाहेन । अध्यादेशलाई पहिला स्वीकारेको तर अहिले मनपरी गदै छ सरकार । आफ्नो दल निकटका व्यापारीका कारण त्यो प्रतिवेदन लत्याउदै छ । गोविन्द केसीका राम्रा मागहरुको वेवास्ता गर्दै छ ।
गंगामायाको छोराको केसमा अदालतले किटानी जाहेरी गरेका मानिसहरुलाई थुनामा राखेर कानून अनुसार कारबाही गर्नुभन्दा पनि कार्यन्वयन गराएन ।
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई जसरी विदेशमा देशको प्रतिनिधित्व गरेर जॉदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई एयरपोर्टबाट अपहरणको शैलीमा ल्याएर बालुवाटरमा राख्यो । एकजना मर्यादित मान्छेलाई यसरी राख्नु हुन्छ कि हुँदैन ।
सरकारको तर्फबाट जसरी प्रधानमन्त्रीका प्रतिक्रिया आएका छन् ती राम्रा छैनन् । नेकपाका महिला नेताहरुले संविधानमा भएको कुरा उठाए । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्दा एनजिओको उक्साहटमा लागेका भनेर आरोप लगाउनु भयो ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार हुँदा किन गोविन्द केसीका मागहरु पूरा भएनन् ?
हो, हिजो पनि गल्ती भएका थिए । तर अहिले पनि गल्ती गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । हिजोको सरकार भन्दा यो सरकार फरक छ । हिजोको सरकार भन्दा यो सरकार धेरै शक्तिशाली छ । दुई तिहाइ छ । कसैले गणपुरक संख्या घटाई देला भन्ने छैन ।
हिजोको सरकारले संविधान सभाबाट संविधान ल्याए । कांग्रेसले गर्न चाहेर पनि सक्दैन थियो । गणतन्त्रको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने । संविधान कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सबै जिम्मा पहिलाका सरकारले पूरा गरेका छन् । अव यो सरकारले संविधानमा भएका मौलिक अधिकारहरु कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुराहरुमा सरकारले दायित्व निभाउनु पर्छ । यसमा कांग्रेसको समर्थन छ । तर सम्बन्धन दिनेमात्र दायित्व होइन । कांग्रेसले नै केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा आयोग बनाएको हो । त्यही आयोगको प्रतिवेदनलाई अध्यादेशबाट हल गर्ने काम भएको थियो । तर अहिलेको सरकारले त्यो कुरा उल्ट्याउँदै छ ।
केसीको मागमा कांग्रेसको सरकारले समर्थन गरेको थियो । हिजो केपी ओली हुँदा पनि अध्यादेश स्वीकार्नु भएको हो । तर अहिले उल्टाउँदै हुनुहुन्छ । अब हिजो कांग्रेसले किन लागु गरेन भन्दा गल्ती भएका छन् । तर हिजो गल्ती भयो भन्दैमा अहिलेपनि त्यही दोहोर्याउनुपर्छ भन्ने होइन । समाजवादमा जाने भनेको छ । यसको लागि शिक्षा र स्वाथ्यमा राज्यको दायित्व बढी हुन्छ ।
नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुन्छ कि हस्तान्तरण ?
प्रतिपक्षको काम फरक हो । तर हाम्रो नेतृत्वमा अहिले पनि आफु प्रतिपक्षमा छौं भन्ने नै परेको छैन । यो मनोविज्ञानले पार्टी सही तरिकाले चल्दैन । यही तरिकाले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकिंदैन । यसको भूमिका संसद, सडक र मिडियामा हुन्छ । यो खालको भूमिका निभाउन सक्ने मानिस नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ ।
पूरानै शैलीले अब कांग्रेस चल्दैन । सडकको अपेक्षा, संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिका नै कांग्रेसले निभाउने हो । अब टाउका गनेर नेतृत्वमा आउन सम्ंभव छैन । पहिलाको जसरी बहुमतको डण्डा चलाएर नेतृत्व गर्न सकिदैन ।
देउवाको विकल्पमा रामचन्द्र पौडेल हुने कि पुस्तान्तरण नै हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेस परम्परावादी छ । यसमा नेतृत्वमा जाने मानिस पाको हुनुपर्ने । अझ भनौं कपाल फुलेको हुनुपर्ने । यस्तो नेतृत्वलाई आम रुपमा स्वीकार्ने चलन छ । पंञ्चातकालदेखि राजनीति गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ । अब यो सबै मान्यताहरुलाई भत्काउनु पर्छ । भत्कन्छ । तर अहिले नै पूराको पूरा परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि छैन । तर यो पटक बाट पुस्तान्तरण नै हुन्छ । देउवाको विकल्प पौडेल होइनन् । छलाङै त मार्दैनन् तर पुस्तान्तरण हुन्छ । अव नेतृत्वमा दोस्रो पुस्ता आउँछ ।
पहिलो पुस्ताको नेतृत्व मिलेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न राजी भएन भने के हुन्छ ?
अब नेतृत्वले बहुमतको डण्डाको मनोवृत्तिबाट मुक्त भए हुन्छ । अब बहुमतको डण्डाले हुँदैन । अब टाउको गनेर नेतृत्वमा बस्न सकिंदैन । अब आफुुसँग सम्बन्ध छ भन्दैमा नेतृत्वमा बस्ने वातावरण बनाउ‘दैन । पार्टीको भविष्यलाई नै सक्ने गरि कोही कसैको पछाडि लाग्दैन । पार्टी पहिलो हो । पार्टीका मुद्धा, देश र जनताको मुद्धालाई उठाउने व्यक्ति नै अब कांग्रेसको नेतृत्वमा आउँछ । परिवर्तित समयलाई बुझेर पार्टी हाक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । कांग्रेसको मनोविज्ञान अहिले पनि सत्ता पक्षको छ । तर कांग्रेस ५ बर्षका लागि प्रतिपक्ष भएको छ । मनोविज्ञान नै बदल्नु पर्ने अवस्था छ ।
सरकार एग्रेसिभ भए कांग्रेसमा पनि परिवर्तन आउँछ भन्ने मानसिकता छ भन्छन् नि, यो सत्य हो ?
सरकारले राम्रो काम गरेमा प्रतिपक्षको भूमिका कम हुन्छ । प्रतिपक्ष भूमिकामा त्यो समयमा बढी हुन्छ जब सरकार धेरै गल्ती गर्छ । जब सरकारले लोकप्रिय काम गर्यो भने प्रतिपक्षले बोल्ने मुद्धा नै हुँदैन । तर यो सरकारले धेरै गल्ती अहिले नै गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा शपथ नै नगरी प्रधानमन्त्रीको शपथ खानुभयो । लोकतन्त्रको ठूलो उपहास हो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नगरी मुख्यमन्त्रीको शपथ नुहने भएकाले प्रदेश प्रमुखको नियुुक्ति गर्यो । मुख्यमन्त्री आफ्ना धेरै हुने भएकाले । यही सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख मान्य हुने तर त्यही सरकारले नियुक्ति गरेका राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई मानेन । उहाँले कानून हेर्नु भएन आफु अनुकुल छ कि छैन भन्ने हेरे ।
गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको अनुसन्धान विभाग आफु मातहत ल्याउनु भयो । यहाँ ४ सय जना प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नियुक्ति हुन्छन् । कहीँ कतै जाँच दिनु पर्दैन । तिनलाई दिने तलबको हिसाब कहीँ कतै राख्नु पदैन ।
राजस्व विभाग आफु मातहत ल्याउनु भयो । यो भनेको देशको अर्थतन्त्र हो । उनलाई थाहा छ पैसा कहाँ कति आउँछ भनेर । पैसा आफु अनुकुल चलाउन पाइन्छ ।
संम्पति शुद्धीकरण विभाग आफु मातहत ल्याउनु भयो । यसको डण्डा चलाएर आफु विरुद्ध बोल्नेलाई तह लाउन चाहन्छन् ।
गोविन्द केसीको अनसनको नै खिल्ली उडाउनु भयो । उहाँ डाक्टर हो तर यो देशको नागरिक पनि त हो । यस्ता कामहरुले यो सरकार एकमनावादी अथवा अधिनायकवादी प्रवृतितर्फ उन्मुख छ ।
तर यो सरकार असफलताको बाटोमा छ । यो सरकार ज्ञानेन्द्रपथमा जॉदै छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले भनेका हुन् कि माइतिघर मण्डलामा प्रतिबन्ध लगाउँदा तानाशाह हुने तर ओलीले प्रतिबन्ध लगाउँदा गणतन्त्रवादी हुन्छ । ओली माइतीघर मण्डलामा भाषण गरेर प्रधानमन्त्री भएका हुन तर आज आफैंले माइतिघर मण्डलामा प्रतिबन्ध लगाएँ । यी सबै कामले हामीलाई बढी फाइदा हुन्छ । सरकार जति बढी गल्ती गर्छ त्यति प्रतिपक्षलाई फाइदा हुन्छ ।
तपाईको भनाइमा यो सरकार अब अधिनायकवाद तर्फ हिडेको नै हो त ?
यो त ओलीको व्यवहारले देखाउँछ । उहाँ रचनात्मक काममा भन्दा पनि कांग्रेसलाई गाली गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ । के कांग्रेसलाई गाली गरेर समृद्धि आउने हो । नियत नै खराब छ । भावना खराव छ । हामी के समृद्धिका बाधक हौ र ? प्रधानमन्त्री त हाम्रो पनि हुन् नि । मलाई मेरो प्रधानमन्त्री ओली हुन् भनेर गर्व गर्ने काम गर्नु पर्याे । उहाँमा त दुई तिहाइको घमण्ड मात्र बढेको छ ।
बुद्धिजिवीहरुले लेख लेख्न हुँदैन गाली गर्न थाल्नु हुन्छ । बिर्को लगाएका बुद्धिजीवीहरु भन्दै गाली गर्नुहुन्छ । यो प्रवृति र मनोविज्ञान राम्रो होइन । यो देशको लागि पनि राम्रो होइन ।
यो सरकारका समृद्धिका नारा कत्तिको यथार्थपरक छन् ?
जनताले खोजेको धेरै कुरा प्राप्त गरेका छौं । संविधान सभाबाट संविधान ल्याएका छौं । गणतन्त्र आएको छ । समावेशी लोकतन्त्र खोजेका थियाैं आएको छ । सबै समुदायको अधिकार खोज्यौं, पाएका छौं । तर अहिले ठूलो बिडम्बना आएको छ । यतिका उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने छ । किनकी ओली जस्ता गलत व्यक्तिको हातमा गणतन्त्र नेपाल परेको छ । हामीले सबै थोक पायौं र परिणाममा ओली जस्तो गलत नेतृत्व पायौ ।
आज ओलीलाई पानी जहाज ल्याउन, वृद्ध भत्ता पाँच हजार बनाउन कसले रोकेको छ ? रेल ल्याउन कसले रोकेको छ ? सिण्डिकेट तोड्न कसले रोकेको छ ? घर घरमा ग्यॉस पाइप जोड्न कसले रोकेको छ ? अहिले त दुई तिहाइ बहुमत छ त । यो सरकारले गरे भैहाल्यो नि ।
प्रदीप पौडेल, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेसबाट थप